प्रचण्डलाई किन यस्ताे सुविधा ? - Deshko News Deshko News प्रचण्डलाई किन यस्ताे सुविधा ? - Deshko News
प्रचण्डलाई किन यस्ताे सुविधा ?
काठमाडाैं, फागुन १७
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले कानुनी मापदण्डबिना नै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विलाशी गाडी सुविधा दिएको छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई जथाभावी गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा दिन थालेपछि सर्वोच्चले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नबनाई कसैलाई पनि सुविधा नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडाको आवास र चार कर्मचारी रहेको सचिवालयसहित विलाशी गाडी दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यादवलाई टोयोटा प्राडो गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसहितको सुविधा दिएको छ ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवको सुविधाका बारेमा कुनै निर्णय नगरेकाले घरमालिकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट घरभाडा अहिलेसम्म पाएका छैनन् । घरमालिकले घरभाडा नपाएकाले पूर्वराष्ट्रपति यादवसित किचकिच गरिरहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई टोयोटा प्राडो गाडी र संसद सचिवालयले नेम्वाङलाई ६० लाख रुपैयाँमा गाडी खरिद गरी चालक र इन्धनसहितको सुविधा दिएको छ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाइ पछुवा सुरक्षाकर्मीसहितको सवारी साधन भने पहिल्यैदेखि उपलब्ध गराइरहेको छ । उनीहरूलाई छुट्टै गाडी सुविधा भने दिइएको छैन । इकान्तिपुर